समुद्री नुन - के तपाईलाई थाहा छ शरीर र कपालको लागि फाइदाहरू? | बेजिया
शरीर र कपाल को लागि समुद्री नुन को लाभ
सुसाना Godoy | | सुन्दरता
के तपाईलाई थाहा छ समुद्री नुनले शरीर र कपालको लागि धेरै फाइदा गर्दछ? ठीक छ, हो, यो एक ठूलो मद्दत हो र यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, यो समय हो कि तपाईंले यसलाई अभ्यासमा राख्नुहुन्छ। किनकि पक्कै पनि तपाइँसँग तपाइँको उत्कृष्ट व्यंजनहरूमा स्वाद थप्नको लागि यो घरमा छ, त्यसैले अब तपाइँ यसलाई छाला र कपाल दुवैको लागि र उत्कृष्ट परिणामहरूको लागि नयाँ प्रयोग दिन सक्नुहुन्छ।
समुद्री नुनमा धेरै गुणहरू छन् किनभने यो सबैभन्दा प्राकृतिक उत्पादनहरू मध्ये एक हो। त्यसोभए यदि तपाइँ यसको सबै उत्कृष्ट फाइदाहरू लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ निम्न सबै चीजहरू गुमाउन सक्नुहुन्न। अब तपाईं आफ्नो छाला र कपाल दुवै सफा, शुद्ध र धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यो सत्य हो कि तपाईंसँग अन्य उत्पादनहरू हुन सक्छन् तर यस अवस्थामा, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ।
1 समुद्री नुनले तपाईंको छालालाई गहिरो रूपमा सफा गर्छ
2 छाला Exfoliates
3 सेल्युलाईट कम गर्छ
4 तेल कपालको लागि उपाय
5 एक्ने रोक्नुहोस्
समुद्री नुनले तपाईंको छालालाई गहिरो रूपमा सफा गर्छ
कहिलेकाहीँ हामी पूर्णतया सफा छाला देखाउन सक्षम भएकोमा पागल हुन्छौं। तर यो प्राप्त गर्न सधैं सजिलो हुँदैन, त्यसैले हामीलाई उत्पादनहरू चाहिन्छ जसले यसलाई एक चरणमा गर्छ। त्यसोभए, समुद्री नुन तिनीहरू मध्ये एक हो किनभने एन्टिसेप्टिक गुणहरू छन् जसले हाम्रो छालालाई निको पार्छ। तसर्थ, सरसफाईको अतिरिक्त, यसले यसलाई कीटाणुरहित पनि गर्नेछ, त्यसैले यदि तपाईंलाई यसमा कुनै प्रकारको समस्या छ वा चोट लागेको छ भने, यो निश्चित रूपमा तपाईंले सोचेको भन्दा धेरै चाँडो निको हुनेछ।
सफाईको अतिरिक्त, यो छालालाई एक्सफोलिएट गर्नको लागि पनि उपयुक्त छ। हप्तामा एक पटक हामीले छालामा राम्रोसँग एक्सफोलिएशन गर्नुपर्छ। यसको कारण अरू केही होइन, पूरै तरिकाले छिद्रहरू सफा गर्नु, परिसंचरण सक्रिय गर्नु र पक्कै पनि, सबै प्रकारका अशुद्धताहरूबाट छुटकारा पाउँदै कोशिका नवीकरणलाई यसको पाठ्यक्रम चलाउन दिनुहोस्। त्यसोभए, हामी भन्न सक्छौं कि यो छालालाई अक्सिजन गर्ने तरिका हो र जस्तै, यो अनुहार र खुट्टा वा हात, आदि दुवैको लागि उत्तम कार्य हुनेछ। समुद्री नुनमा पाइने खनिजहरूको लागि तपाईंले विषाक्त पदार्थहरूलाई अलविदा भन्नुहुनेछ। अब तपाईलाई कुनै पनि अन्य उत्पादनको आवश्यकता पर्दैन!
सेल्युलाईट कम गर्छ
यो सबैभन्दा सामान्य समस्या मध्ये एक हो। सेल्युलाईटले हाम्रो छाला लिन्छ र यसलाई अलविदा भन्न गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईं परिसंचरण सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ समुद्री नुन र मिश्रण को लागी धन्यवाद जुन तपाइँ तपाइँको सामान्य मोइस्चराइजर को एक सानो थपेर प्राप्त गर्नुहुनेछ।। हप्तामा एक पटक तपाईंले यो मिश्रण प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। मसाज गर्दा हामीले भनेजस्तै रगत सक्रिय गर्छौं, तर जम्मा भएको बोसोलाई पनि कम गर्छौं।
तेल कपालको लागि उपाय
यस अवस्थामा, हामी चाहन्छौं टाउकोको तेल नियन्त्रण र एकै समयमा यसले कपालको वृद्धिलाई पनि समर्थन गर्दछ। यसरी एउटै ढुङ्गामा दुई चरा मार्छौं। प्रक्रिया धेरै सरल छ, किनकि तपाईले केवल दुई चम्मच समुद्री नुनलाई शैम्पूको दुई भागहरूसँग जोड्नु पर्छ। यो तपाईले निर्णय गर्नु हुनेछ। अब तपाईंले केही मिनेटको लागि सम्पूर्ण टाउकोमा बिस्तारै मसाज गर्नुपर्छ। तपाईंले ती मध्ये एक जोडीलाई आराम दिनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंले प्रशस्त पानीले पूर्ण रूपमा हटाउनुहुनेछ।
यस तथ्यको लागि धन्यवाद कि समुद्री नुन एक उत्तम क्लीनर हो, फोहरहरू जम्मा गर्नबाट रोक्छ र यसको कारणले गर्दा डरलाग्दो पिम्पलहरू देखा पर्छन् जुन अदम्य मुँहासे बन्छन्। यस अवस्थामा, यो फेरि एक पटक क्याल्सियम जस्ता खनिजहरू हुन् जसले हामीलाई पिम्पल वा पिम्पलहरूबाट मुक्त छाला धेरै रेशमी बनाउन मद्दत गर्दछ। यो गर्नको लागि, तपाईलाई एक चम्मच नुन र पानीको समान मात्रा चाहिन्छ जुन तपाईले राम्ररी मिश्रण गर्नुहुनेछ गुलाबको तेलको केही थोपा थप्नको लागि। त्यसपछि, तपाईंले यसलाई अनुहारमा लागू गर्नुपर्छ र लगभग 10 मिनेट पर्खनुपर्छ। पानीले धोएर हटाउनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो मोइस्चराइजिंग अनुहार क्रीम लगाउनुहोस्। तपाईंले पक्कै पनि परिवर्तनहरू याद गर्नुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » शरीर र कपाल को लागि समुद्री नुन को लाभ
सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने कुञ्जीहरू